Laser Goynta iyo Beddelaadda Label, Qalabka koollo, Film Transfer Retro-milicsiga - Laser Dahab
Jarida Laser Dhimista iyo U Beddelashada Calaamadaha, Qalabka Koolada, Filinka Wareejinta Dib-u-milicsiga
Mashiinka Jarida iyo Beddelaadda Laser
QAARKA DAHABKA - NIDAAMKA LASARKA EE Dhimashada jarista iyo dhammaystirka xargaha
Ku Saabsan Nidaamka Beddelashada Dijital ah
Horumarka degdegga ah ee bulshada iyo kala-duwanaanta iyo kala-soocidda baahiyaha nololeed ee dadka, tiknoolajiyadda dhijitaalka ah ayaa kor loo qaaday, hababka daabacaadduna si isdaba joog ah ayey isu beddelayaan. Daabacaadda dijitaalka ahi waxay ku noqotay isbeddel aan laga soo noqon karin warshadaha, iyada oo ay sii kordhayaan ganacsiyada gaagaaban, ganacsiyada yar-yar ee la habeeyay, iyo jawiga u habboon, ee looga baahan yahay kharashka keydinta.
Daabacaadda dhijitaalka ah ee shakhsiga ah ayaa soo jiidata sumcado badan iyo sumado soosaarayaal daabacan sababtoo ah xawaareheeda degdegga ah, tayada sare, wax soo saarka caqliga iyo habka otomatiga.
Maaddaama daabacaadda dhijitaalka ah ay korayso, sidoo kale leysku dhinto goynta!
Fikradeenu waa inaan siino macaamiisha xalal dhameystiran oo calaamadeyn ah. Nidaamkeena qaabaynta, waxqabadka sare ee laser-ka dhimista iyo xallinta dhammaystirka waxaa loogu talagalay inay la kulanto filashooyinkaaga iyo baahiyahaaga ganacsi ee soo kordhaya, sidaa darteed waxaad macaamiishaada ugu deeqi kartaa xalal calaamadeysan oo cusub.
Maxay yihiin faa'iidooyinka goynta leysku u dhinto sumadaha?
Mashiinnada leysarka u dhinta leysarka ee laser-ka dahabka ah ayaa si weyn loogu qadariyo soo saarayaasha sumadda maadaama ay abuuri karaan noocyo badan oo sumado ah hal, xawaare sare, geedi socod si otomaatig ah u shaqeeya.
Wareeg deg deg ah
Waqti badbaadin. Looma baahna in la sameeyo wasakhahaasi, baabi'inta wasakhda adag ee samaynta waqtiga.
Qalabka jarista iyo sawirada waa la beddeli karaa wakhti kasta. Laser-ka waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo qaabeyn ah: iyadoo leh hal ama laba laab il.
Nidaamka Galvo wuxuu u oggolaanayaa dogobku inuu dhaqso u dhaqaaqo, isagoo si dhammaystiran loogu fogeeyay aagga shaqada oo dhan. Goynta-xawaaraha sare si ay u qanciso baahida macaamiisha ee waqtiga dhabta ah.
Heerka adduunka CO2 RF laser. Tayada la gooyey had iyo jeer waa kaamil ah oo joogto ah waqti wakhti leh kharash yar oo dayactir ah.
Goynta saxda ah iyo qaybaha si faahfaahsan u jahaysan. Qalabkani wuxuu dammaanad qaadayaa saxnaanta goynta sare xitaa marka la jarayo sumadaha leh farqiga aan caadiga ahayn.
Hawlaha xaruumaha badan ee qaabdhismeedka ah sida daabacaadda jajabka, laminating, Varnishing UV, jeexitaanka, iyo dib u cusbooneysiinta, iwm.
Ku habboon in laga shaqeeyo waxyaabo badan oo kala duwan
Warqad dhalaalaya, warqad gogol ah, kartoon, caag, polypropylene, caag, filim, iwm.
Ku habboon noocyada kala duwan ee shaqada
Laser wuxuu jarayaa nooc kasta oo muuqaal ah - goyn buuxa iyo goynta dhunkashada (jarista nuska), daloolin, xardho, calaamadeynta, tirinta, iwm.
LASARKA DAHABKA - Mashiinka Goynta Mashiinka Mashiinka Hordhaca
GOLDEN LASER waa shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha keenta goynta leysarkatiknoolajiyada warshadaha baakadaha & calaamadeynta. Ay Mashiinka mashiinka xawaaraha sare leh ee xargaha badan beddeli karaa taxane ah mashiinno shaqeynaya oo hal dhaqameed ah sida mashiinka dhaqameed-dhimista, mashiinka jeexjeexa, mashiinka laminating, mashiinka daabacaadda ee flexo varnish, mashiinka feerka, iyo dib u celinta.
Our laser goynta dhimista iyo dhammaynta xalalka isku mar gaari kara daabacaadda flexo, laminating, goynta, kala badh goynta, xoqidda, feer, xardho, nambarka taxanaha, shaabbad kulul iyo jeex jeex. Waxay keydisay kharashka qalab badan oo maalgashi, iyo kharashka shaqada iyo keydinta daabacaadda iyo soosaarayaasha baakadaha. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay daabacadaha sumadaha, sanaadiiqda baakadaha, kaararka salaanta, cajaladaha warshadaha iyo warshadaha kale.
Tilmaamaha LASERKA DAHABKA - Nidaamka Aqoonsiga Aragtida QR Code
Goynta si isdaba joog ah, si habsami leh u hagaaji shaqooyinka duulimaadka.
Kaamirada si toos ah ayey u baareysaa si loo aqoonsado nambarka QR.
Ka takhalusida qashinka.
Waqtiga dejinta ee naqshadeynta naqshadeynta, lammaanaha ugu fiican ee daabacadaha dijitaalka ah.
Qaabka Lambar LC350
Ballaarinta Webka 350mm / 13.7 ”
Ballaca Webka 600mm / 23.6 ”
Xawaaraha Webka 0 ~ 80m / min (Xawaaruhu wuu ku kala duwan yahay sawirada, qalabka, dhumucda different
Isha Laser Shaabadaysan CO2
Awood Laser 300W / 600W
Sax Laser Goynta 0.1mm
Width Goynta Laser 340mm
Koronto 380V 50Hz / 60Hz, Saddex waji
Qaabka Lambar LC230
Ballaarinta Webka 230mm / 9 ”
Ballaca Webka 400mm / 15.7 ”
Awood Laser 150W / 300W / 600W
Naqshadeynta qaabdhismeedka, ka sii jilicsanaanta jaangooyooyinka iyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah
Qaabeynta caadiga ah: furitaanka + hagaha websaydhka + laser dhimista goynta + ka saarida qashinka + keli wareejinta
Fursado badan: daabacaadda dhijitaalka ah / bireedka qabow / faashadda / daabacaadda shaashadda / goynta fidsan / shaabbad kulul / mindi wareegsan oo goynta dhinta / laba rogid ...
Qalabka La Isticmaali Karo
Waraaq, kartoon, qalabka milicsiga, 3M cajalad warshadeed, PP, PET, polyimide, polymeric, caag iyo qalabka filimka, iwm.
Sumadaha cuntada iyo sharaabka, sumadaha isku qurxinta, sumadaha qalabka guryaha, sumadaha wax soo saarka elektarooniga ah, sumadaha milicsiga, sanaadiiqda hadiyadaha, baakadaha elektarooniga ah, iwm.
QAAR KA MID AH SHAQAALAHA SHAQAALAHA
SHAQOOYIN CAJIIB AH IN LASER DHIMO MAQAALKA MAQAARKA LA SAMEEYAY!
Warshadaha Codsiga iyo Wadaagista Dacwada Macaamiisha
Warshadaha daabacaada dhijitaalka ah
Tiknoolajiyada waxsoosaarka sumcada dhaqsaha badan
Shirkadda E waa soo saare qoraallo daabacan in ka badan 50 sano Bartamaha Ameerika. Kordhinta amarada-mugga yar ee amarrada la habeeyay, qiimaha dhimista dhaqameed ee summadaha ayaa aad u sarreeya si loo daboolo taariikhda gaarsiinta macaamiisha la codsaday.
Dhamaadkii 2014, shirkaddu waxay soo bandhigtay jiilka labaad ee leysarka dhijitaalka ah ee loo yaqaan 'laser laser cut' iyo nidaamka dhammeynta 'LC-350' ee laga soo qaaday GOLDEN LASER, iyadoo la dahaarayo isla markaana la faarujinayo howlaha si ay ula kulmaan macaamiisha baahiyahooda loo habeeyay.
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay noqotay saldhiga ugu weyn ee soo saarista sumadaha daabacan iyo wax soo saarka baakadaha ee gobolka, waxayna ku guuleysatay abaalmarino badan oo ay ka heshay dowladda hoose, iyadoo noqotay shirkadda ugu tartameysa soo saarista sumadaha.
Foornada qaab-yar + leysarka u dhinta laba-in-hal qalab
Shirkadda T waa shirkad Jarmal ah oo soo saarta sumadaha daabacaadda dhijitaalka ah oo taariikh dheer leh. Waxay leedahay heerar aad u adag iyo shuruudaha soo iibsiga qalabka. Kahor intaysan ogaan LASARKA DAHABKA ah, qalabkooda oo dhan waxaa laga iibsaday Yurub, waxayna u hamuun qabeen inay helaan qaab yar oo UV varnish + laser dhinta-goynta labo-in-hal mishiin mishiin. In 2016, sida ay shuruudaha shirkadda T, GOLDEN LASER horumariyo laser kartoo mashiinka goynta dhinta LC-230. Iyada oo xasilloonida iyo saamaynta goynta tayo sare leh, ay aad u qadarin macaamiisha. Isla markii shirkadaha kale ee calaamadaha yurub ay heleen warka, waxay la xiriireen GOLDEN LASER waxayna u xilsareen GOLDEN LASER inay soo saaraan leysarka dhijitaalka ah ee laser-ka ah iyo nidaamyada dhammeeya ee daboolaya baahidooda shaqsiyeed.
Shirkadda M, oo ah soosaaraha ugu caansan adduunka ee sumadaha daabacan, ayaa toban sano ka hor ka iibsatay mashiinnada jarjarka leysarka leysarka. Si kastaba ha noqotee, qalabka yurubiyanku waa mid qaali ah oo qaali ah in la ilaaliyo, waxay isku dayeen inay helaan isla nooca mishiinka goynta dhimasha laser. Labelexpo 2015-kii magaalada Brussels, indhahoodu way iftiimayeen markay arkeen mishiinka goynta leysarka LC-350 ee ka imanaya GOLDEN LASER.
Ka dib markii ay ku celceliyeen baaritaan iyo cilmi baaris, ugu dambeyntii waxay doorteen GOLDEN LASER LC-350D laba-madax-xawaaraha sare mashiinka goynta leysarka oo leh waxqabad ka fiican. Nidaamku wuxuu ku socdaa xawaareyaal gaaraya illaa 120 m / min, oo leh saldhig wareega wareega ah, isweydaarsiga warqad duubista iyo nidaamyo kale oo dheeri ah si kor loogu qaado qiimaha dheeraadka ah ee alaabada macaamiisha.
Dharka iyo warshadaha qalabka kabaha
Waxyaabaha Retro-milicsiga goynta laser
Shirkadda R waa shirkadda ugu weyn adduunka ee ka shaqeysa soo saarista dharka. Waxay soo bandhigeen in kabadan 10 nooc oo ah silsiladaha HALISKA HALISKA MARS ee XY mashiinada goynta laser sanado badan kahor. Maaddaama amarradu sii kordhayaan, qalabkooda hadda jira ma dabooli karo baahidooda wax soo saar. LASERKA DAHABKA ah ayaa soo saaray aaladda dhimista goynta leysarka ee loogu talagalay qaabeynteeda, taas oo inta badan loo isticmaalo goynta qalabka milicsiga.
Cajalado koollo oo isku mid ah / Laba Dhinac ah
Astaamaha guud ee nooca cajaladaha:
Ballaca duudduuban ee ugu caansan wuxuu noqon doonaa 350mm
Dhumucdiisuna waa 0.05mm ilaa 0.25mm
Goynta buuxda iyo dhunkashada goynta cajaladaha duuban